Ilaina ve ny fikarakarana vatana ho an’ny lehilahy? – Blaogin'i Voniary
Tamin’ny heriny, nentina teto ny fikarakarana vatana eo amin’ny vehivavy. Ary eo amin’ny lehilahy? Indro resahina amintsika anio indray izany. Tovolahy iray mpampianatra filozofia, Tsirery Chris, no nanontanianay mikasika ny antony ilana ny fikarakarana vatana sy ny fomba atao amin’izany.
Tsirery Chris, mpampianatra filozofia eny amin’ny Anjery manontolo, very 10 kilao
Miray Lalaina: Ilaina ve ny fikarakarana vatana ho an’ny lehilahy ?
Tsirery Chris: Ie, satria ny lehilahy taratry ny fiarahamonina hiankinan’ny adidy. Ny fitenintsika malagasy milaza hoe: « ny adidy tsy an’olon-dratsy ». Azo lazaina izany fa ny endrika ivelany dia mariky ny fahavonona anaty. Manova ny fomba fijerin’ny olona ny endrika asehontsika. Tsy voatery ho fahajejoana izany fa fanehoana ny filaminana anaty : « fanahy salama ao anaty vatana salama » hoy ny vahiny. Mariky ny fiadanana izy io.
ML: Inona avy no ataonao raha resaka fikarakarana vatana ?
TC: Ho zaraiko roa ny momba azy io.
Voalohany raha makasika ny endrika ivelany dia ny vatana, ny fiakanjo fa indrindra ihany koa ny volo.
Izaho manokana dia olona tia fanatanjahan-tena : manao paompy 50, mibata lanjam-by (haltère) ihany koa, manao « squat » sy « planche » ary milalao basket- ball isaky ny Sabotsy n’inon’inona zava-mitranga.
Tsy maintsy milalao Basket-ball isaky ny Sabotsy
cc : Tsirery Chris
Mahakasika ny fiakanjo koa dia tandremako tsara: hitsaran’ny fiaraha-monina ny tsirairay mantsy izy io. Noho izany, ataoko mifanaraka amin’ny izay toerana aleha . Eo amin’ny andavanandro aho tia fitafy tsotra, « street » hoy ny vahiny . Rehefa mamonjy lanonana ofisialy kosa tahaka ny hoe fihaonan’ny mpampianatra na fivoriam-pianakaviana dia miakanjo mianjaika: lobaka, pataloha, sy kiraro mifandraika amin’izay.
Ary farany raha mahakasika ny endrika ivelany, tsy latsa-danja ny volo. Izaho dia olona manalava sady misafidy ny hirandrana. Ny antony dia satria tsy misaritaka ny volo rehefa randranina, tsy mila mampiasa saina ihany koa ny amin’ny fibangoana azy. Nosafidiako koa satria tena ao anaty kolon-tsaina malagasy sady fanaon’ny lehilahy. Io no fomba hanehoako ny maha izao ahy, mandefa hai-kanto amin’ny manodidina. Fa indrindra, ho ahy ny famelana ny volo hitsiry dia mariky ny « liberté » — fanahy iniako najanona teny vahiny satria araky ny fandalinana filozofia dia tsy voadika tanteraka amin’ny voambolana fahafahana izy io. Farafaharatsiny, isaky ny roa herinandro aho mamerina mirandrana raha tsy misy lanonana. Marihana etoana koa fa mamelona olona eo amin’ny manodidinako ihany koa ny mandrandrana.
Aorian’ny endrika ivelany dia manan-danja indrindra amin’ny fikarakarana vatana ny sakafo. Tsy mifady hanina manokana aho kanefa tsapa fa tena misy fiatraikany amin’ny vatana ny zavatra hoanina. Efa nanandrana nifady hanina fa voamaika mandrapaka (mihomehy). Ny mandanjalanja hoe hatraiza no fetra sy ny hoe ilaina ve sa tsia no tena zava-dehibe. Rehefa fantatra ny tanjona dia mahalala miteny hoe aoka rehefa ampy.
Ireo sokajy roa ireo nefa dia tena miankina amin’ny saina ; tokony ny fikarakarana saina aza no nataoko voalohany. Ny saina no mibaiko sy mifehy ny vatana tsinona.
ML: Inona ary ny toro-hevitra atolotrao ho an’ny mpamaky blaogy ?
TC: Indreto misy fehezanteny fohy manome hery, manome risika, hihazona sy handroso amin’ny tanjona tiana ho tratrarina :
« Ny fomba fisainana no mitondra ny zavatra rehetra » : manomboka amin’ny fanomanan-tsaina ny fikarakarana vatana. Nanampy ahy tamin’ny fanenana tena (very 10 kilao)
« Mangala dingana iray isan’andro» : dingana madinika isan’andro fa tsy hoe iray na telo volana ! Ny ezaka madinika isan’andro no entina hanatratrarana ny tanjona, toy izay miazakazaka am-boalohany nefa tsy maharitra.
« Ny fifehezan-tena no mampifandray ny tanjona sy ny asa vita »
Manalava volo sady misafidy ny hirandrana
Ho ahy manokana, paompy 10 no niaingana: natao foana, nampitomboana 5 isan-kerinandro . Mahavita 50 isan’andro izao. Mitombona amin’ny zavatra rehetra ireo fomba fijery ireo: amin’ny fianarana, ny asa, sy izay lafiny ahatsapanao kilema any aminao. Aza manaiky resin’ny kilema toy ny hakamoana, ny fahamenarana sy ny tsy fahalavorariana.
basket-ball, fahaiza-miaina, fanatanjahantena, fikarakarana vatana, toe-tsaina mpandresy, Tsirery Chris
2 commentaires sur “Ilaina ve ny fikarakarana vatana ho an’ny lehilahy?”
Misaotra indrindra 😉
Mankasitraka anao nizara ihany koa!